PicsArt Photo Editor: Pic, Video & Collage Maker APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PicsArt ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ: ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို & ကောလိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
PicsArt ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ: ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို & ကောလိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို APK ကို
600 သန်း + ခိုင်မာတဲ့တပ်ဆင်ပြီး, PicsArt မိုဘိုင်းပေါ်တွင် #1 ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်ပါ pic collage ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ PicsArt Download နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများ, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, collage ထုတ်လုပ်သူပျော်မွေ့, ကင်မရာ, အခမဲ့ clipart စာကြည့်တိုက်, အသုံးပြုသူဖန်တီးစတစ်ကာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံဆွဲ tools တွေနဲ့သန်းပေါင်းများစွာသော။ PicsArt ရဲ့အားလုံးကြောက်မက်ဘွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုအောင်နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် Collage နှင့်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုသို့အခမဲ့-to-ပြင်ဆင်ရန်ဓာတ်ပုံများကို remixing အားဖြင့်ပျော်စရာရှိခြင်းအကြောင်းကို။
ရွှေ Go! PicsArt ရွှေသငျသညျ Premium စတစ်ကာများ, font, Frame, Collage နှင့်မျက်နှာဖုံးများထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှ access ကိုပေးသည်! ဤရွေ့ကားသီးသန့် PicsArt ပစ္စည်းများတည်းဖြတ်ရေးအတွက်အသုံးပြု & PicsArt အပေါ် remixing, သင်၏ဖန်တီးမှုအတွက် PicsArt အပေါ်နဲ့ off shared နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် PicsArt ရွှေအနေနဲ့အခမဲ့ကြော်ငြာများတည်းဖြတ်ရေးအတွေ့အကြုံကို & သင် bi-အပတ်စဉ်ပေးပို့သစ်သီးသန့် PicsArt အကြောင်းအရာပါဝင်သည်။ သင်တစ်ဦးအမည်ခံလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေအဘို့ပရီမီယံအကြောင်းအရာခန့် $ 3,000 မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ PicsArt ရွှေ subscription ကိုအလိုအလျှောက်အသီးအသီးအသုံးအနှုန်းရဲ့အဆုံးမှာပြည့်ကြလိမ့်မည်နှင့်သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသင်နှုတ်ထွက်မဟုတ်လျှင်အကောင့် Play သင်၏ Google မှတဆင့်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ ပြန်အမ်းဟူသောဝေါဟာရကိုမဆိုအသုံးမပြုဘို့ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တစ်ဦး subscription ကိုဝယ်ယူရန်သည့်အခါတစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းကာလမဆိုအသုံးမပြုတဲ့အဘို့ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ Google Play တွင်အကောင့်တစ်ခုအခမဲ့အစမ်းသုံးကန့်သတ်။ https://picsart.com/privacy-policy?hl=en
PicsArt ရဲ့ collage ထုတ်လုပ်သူအသစ်သောရုပ်ပုံများကိုအခမဲ့တင်းပလိတ်များ၏ 100s, & အဆိုပါ PicsArt အသိုင်းအဝိုင်းအပ်လုပ်တင်ထားသည်များ 1000s နောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်နေ့တိုင်းပေးပါသည်။ PicsArt သငျသညျဇယားကွက်စတိုင် pic ကို Collage, template Collage & လွတ်အစီအစဉ် Collage လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
, cutouts, သီးနှံ, လမ်းပိုင်း, ကိုယ်ပွားဖန်တီးသောစာသား add & ခါးဆစ်ကိုထိန်းညှိဖို့ tools များပါဝင်သည် PicsArt အံ့သြဖွယ်အင်္ဂါရပ်များ 1000s အတူ။ ဒါဟာအစ (HDR အပါအဝင်) အနုပညာ photo filters, ပျဉ်ပြား, နောက်ခံ, border, callouts & ပိုပြီး၏အပြည့်အဝစာကြည့်တိုက်ရှိတယ်။ အားလုံး tools တွေကိုဒဏ်ငွေ-tuning များအတွက်ဖြီး mode ကိုတို & သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ရွေးချယ်လျှောက်ထားခြင်း။ PicsArt သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမှစာသားကိုထည့်သွင်း & လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်စာလုံးတွေ၏ 100s ပေးပါသည်။ PicsArt လည်း AI အ-powered သက်ရောက်မှုတစ်ခုလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲထားပေးပါသည်။ PicsArt သင်ချိန်ညှိင့်လင်းမြင်သာအတူအလွှာကို အသုံးပြု. နှစ်ဆထိတွေ့မှုလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
1 သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်: PicsArt ရဲ့ Remix Chat ကိုတစ်ခုလုံးအသစ်ကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတည်းဖြတ် & ကြောက်မက်ဘွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုအောင်လမ်း, 1 ပါ!
PicsArt ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုများအသစ်သောတည်းဖြတ်ရေးလှည့်ကွက်သင်ယူဖို့လွယ်ကူသော & ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများအသုံးပြုသူများကိုအေးမြဓာတ်ပုံများ, Collage & တည်းဖြတ်၏ 1000s upload ဘယ်မှာလှုံ့ဆော်မှု, ရှာတွေ့မယ့်ပေါ်ပြူလာလမ်းဖြစ်ကြသည်။
ရုံသေး PicsArtists နွေရာသီမှနှုတ်ဆက်မပြောပါနှင့်။ အရွက် PicsArt ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဖွင့်ရှေ့၌သင်တို့အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တည်းဖြတ် Create!
PicsArt ရွှေစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသီးသန့်ဖောင့်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က filter များမှပရီမီယံအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်!
PicsArt ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ: ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို & ကောလိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
32.33 ကို MB
ထိပ်တန်း 10 မှ Collage ...